Ireo Vahiny Songtsam dia niaina ny ogan'ny Azaleas | Hotels & Resorts
Location: Home » fandefasana » Hotels & Resorts » Ny Vahin'i Songtsam dia miaina ny ogan'ny Azaleas
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Shina • Kolontsaina • Destination • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Luxury • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
Enga anie 18, 2022
Azalea ambanin'ny tendrombohitra oram-panala Meili - sary avy amin'ny Songtsam Hotels
Songtsam Hotels, Resorts & Tours, rojo trano fandraisam-bahiny mirentirenty nahazo mari-pankasitrahana ao amin'ny faritanin'i Tibet sy Yunnan ao Shina, dia eo afovoan'ny iray amin'ireo fisehoan-javatra mahagaga sy voajanahary indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny voninkazo Azalea. Ny vahiny ao Songtsam dia manana fahafahana manokana hahita an'ireo azalea be dia be ao anaty tendrombohitra rakotra lanezy.
Maharitra efa-bolana eo ho eo (Aprily ka hatramin'ny Jolay) ny vanim-potoana mamelana ny Azaleas ary mahasarika mpizaha tany manerana ny faritra. Ny endrik'ireo voninkazo ireo dia samy hafa amin'ny endriny, ao anatin'izany ny miendrika holatra, miendrika lakolosy, miendrika vilia baolina, ary miendrika fantsona, misy loko manomboka amin'ny fotsy, mavokely, ka hatramin'ny jade volomparasy.
Azaleas sy voninkazo manitra hafa dia hita eo akaikin'ny trano Songtsam maro hita ao Shangri-La, Farihy Napa, Farihy Bigu Heavenly, Tacheng, ary Tendrombohitra Snow Meili.
Eo afovoan'ny "Ranony Telo Parallel", Shangri-La dia feno hantsana rakotra lanezy, ala virjiny, kijana voninkazo ary farihy lembalemba. Ny tontolo ara-jeografika manokana amin'ny latitude iva sy ny haavo avo dia namorona tontolo ekolojika miavaka.
Any akaikin'ny atsimoatsinanan'ny tanànan'i Shangri-La, misy kijana lemaka mivelatra antsoina hoe Xiaozhongdian fantatra amin'ny anarana hoe “tena hoso-doko diloilo”, izay ahitana ranomasina midadasika misy azalea fotsy, mavokely ary volomparasy eny amin'ny ahitra, ala, trano fitehirizam-bary any amin'ny faritra avo, ary mirenireny. yaks.
Picnic ao amin'ny sahan'i Shangri-la azalea – sary nalaina avy amin'ny Songtsam Hotels
Amin'ny fahavaratra dia misy ny Farihy Napa voninkazo tsy tambo isaina, anisan'izany ny peony bibidia raozy mena, chrysanthemum bibidia ary mazava ho azy, azaleas. Mandrakotra ny tendrombohitra sy ny lemaka ny ranomasin'ny voninkazo, miaraka amin'ireo monasitera bodista Tibetana mitokana sy tendrombohitra rakotra lanezy eny lavitra eny.
Bigu Heavenly Lake
Ny Farihy Bigu Heavenly dia antsoina hoe "Chu Zhang" amin'ny teny Tibetana, midika hoe farihy kely. Ny voninkazo azalea eo amoron'ny Farihy Bigu Heavenly dia mandrakotra ny sisin'ny farihy toy ny karipetra mavokely maizina. Na dia tsy lehibe na lalina aza ilay farihy, dia mazava tsara, mangina, ary voahodidin'ny ala virjiny lehibe sy ahitra maitso.
Tendrombohitra Snow Meili
Ny vahiny dia afaka mankafy fiara amin'ny làlan'ny Yunnan-Tibet mankany amin'ny Tendrombohitra Snow Meili na afaka manaraka ireo mpitari-dalana eo an-toerana any Songtsam mankany amin'ity toerana mahafinaritra ity amin'ny tongotra. Mamakivaky alan'ny rhododendron alpine lehibe sy hazo kesika, kijana, sakeli-drano, ary amin'ny fehikibo feno zavamaniry isan-karazany ny mpandeha.
Ny riandranon'i Yubeng God eo am-pototry ny tendrombohitra rakotra lanezy dia feno azalea mandritra ny vanim-potoanan'ny voninkazo.
Any amin'ny lohasaha lavan'ny Reniranon'i Jinsha no misy an'i Tacheng, tany kely misy trondro sy vary any an-toerana. Manomboka amin'ny Aprily ka hatramin'ny Mey isan-taona, rhododendron isan-karazany mamelana eny an-tendrombohitra sy ny sahan'i Tacheng. Teny an-dalana avy any Shangri-La ho any Tacheng, ny rhododendron mena-volontsôkôlà, volomparasy-jade ary ravinkazo mamiratra. Ireo vahiny mazoto dia afaka manandrana mitady “Azalea Rapid” eo amin'ireo sosona rhododendron any Tacheng.
Momba an'i Songtsam
Songtsam (“Paradisa”) dia fanangonana trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny any Tibet sy Yunnan, Shina. Naorin'Andriamatoa Baima Duoji tamin'ny taona 2000, mpanatontosa sarimihetsika Tibetana Documentary teo aloha, Songtsam no hany fitambarana fitsangatsanganana mihaja amin'ny fomba Tibetana ao anatin'ny toeram-pitsaboana mifantoka amin'ny foto-kevitry ny fisaintsainana Tibetana amin'ny fampifangaroana fanasitranana ara-batana sy ara-panahy. Ireo fananana tsy manam-paharoa 12 dia hita manerana ny Plateau Tibetana, manolotra ny maha-azo itokiana ho an'ny vahiny, ao anatin'ny tontolon'ny famolavolana voadio, kojakoja maoderina, ary serivisy tsy manelingelina any amin'ny toerana misy hatsarana voajanahary tsy voakitika sy mahaliana ara-kolontsaina.
Momba ny Songtsam Tours
Songtsam Tours, Virtuoso Azia Pacific Preferred Supplier, dia manolotra traikefa voarindra amin'ny fampifangaroana ny fijanonana ao amin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny samihafa natao hahitana ny kolontsaina isan-karazany ao amin'ny faritra, ny zavamananaina manankarena, ny tontolo iainana mahafinaritra ary ny lova tsy manam-paharoa. Songtsam amin'izao fotoana izao dia manolotra lalana roa sonia: ny Circuit Songtsam Yunnan, izay mikaroka ny faritra “Ranony Telo Parallèle” (Lova Iraisam-pirenena UNESCO), ary ny vaovao Lalana Songtsam Yunnan-Tibet, izay manambatra ny Lalana Soavaly Dite Fahiny, G214 (lalana Yunnan-Tibet), G318 (lalana Sichuan-Tibet), ary ny fitsangatsanganana an-dalambe Tibetana Plateau ho iray, manampy fampiononana tsy mbola nisy toy izany ho an'ny traikefan'ny fitsangatsanganana Tibetana.
Momba ny Mission Songtsam
Ny iraka ataon'i Songtsam dia ny hanome aingam-panahy ny vahiny amin'ireo foko sy kolontsaina isan-karazany ao amin'ny faritra ary hahatakatra ny fomba ikatsahan'ny mponina ao an-toerana sy ny fahatakarany ny fahasambarana, hitondrana ireo vahiny ao Songtsam hanakaiky kokoa ny hahita ny azy. Shangri-La. Etsy andanin'izany, manana fanoloran-tena mafy i Songtsam amin'ny faharetana sy ny fitandroana ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina Tibetana amin'ny fanohanana ny fampandrosoana ara-toekarena ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ao Tibet sy Yunnan. Songtsam dia tao amin'ny lisitry ny volamena 2018, 2019 & 2022 Condé Nast Traveler.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Songtsam kitiho eto.
Vaovao misimisy kokoa momba an'i Songtsam
More on: Songtsam Hotels | Songtsam
Ny varavarana miafina mankany amin'ny Shambhala Songtsam dia mitarika ny vahiny sy ny mpamaky Songtsam, Songtsam Hotels|
Songtsam Songtsam Hotels
Fitetezam-paritra indiana am-pielezana any Trinidad sy Tobago ao...
Sandals Foundation mamaly: Mety ho tiana ve ianao?
Ovolo Hotels dia manendry Tale Mpanatanteraka vaovao
Sandals Resorts International dia fahatsiarovana ny nidirany...
Skal Tampa Bay nanangona $5,600 ho an'ireo Okrainiana mpitsoa-ponenana
Tsy miahiahy momba ny COVID-19 intsony ny mpizahatany |...
Sidina tsy miato vaovao avy any Toronto mankany Nashville
Ny fandaharam-potoana vaovaon'ny Oniversiten'i Bournemouth momba ny fizahantany...
Aiza no andoavan'ny mpizaha tany ny sarany ambony indrindra mandritra ny andro mafana
Swoop dia manohy ny sidina Hamilton mankany Las Vegas
Torohevitra momba ny fiara azo antoka ho an'ny faran'ny herinandro amin'ny andron'ny fahatsiarovana
Ghana ny Foibe Maneran-tany vaovao ho an'ny Vahaolana Bold amin'ny...
84% amin'ireo mpanao dia lavitra no manomana farafaharatsiny iray...
Starbucks dia miala amin'i Rosia ho an'ny tsara
Maniry mpizaha tany Rosiana i Syria
Tuvalu no nampiantrano ny jono sy nahandro voalohany isan-taona...
Ny ankamaroan'ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny fianakaviana any Etazonia
Fampiharana 5 tsy maintsy anananao amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra
Voalohany indrindra dia tsy maintsy ampiasaina aty Afrika ny gazy afrikanina
Ny ho avin'ny fizahantany vaovao any Hawaii amin'ny fiteny Hawaiian teratany...
Nidina 28.1% ny asa fanaovana fifanarahana fitsangatsanganana sy fizahan-tany tamin'ny...
Ny Fahatsiarovana ny hanoanana irlandey dia nanetsika ny fanantenana tao NYC
Mozika ao afovoan'ny Mediteranean'i Malta no trano...